Leeds United oo taako u dhigtay kooxda Man United oo ku soo booqatay garoonka Elland Road… +SAWIRRO – Gool FM
Miyuu daafaca Real Madrid ee David Alaba diyaar u noqon doonaa Final-ka Champions League?
Kooxda Chelsea oo qorsheyneysa inay wadahadallo dib ula furto Ousmane Dembele
Laporta oo cadeeyay go’aanka Barcelona ee ku aadan iibinta De Jong & cusbooneysiinta qandaraaska Dembélé
Pogba oo hal arin ku dooran doona Juventus marka loo fiiriyo Paris Saint-Germain
Man City oo isku dayeysa inay hesho adeega xiddig ka tisan kooxda Inter Milan
“Liverpool waxay soo qaadatay xilli ciyaareed heer sare ah, waxaana sugeynaa hadiyadda Gerrard” – Henderson
Liverpool oo saddex dhibcood muhiim ah ka soo heshay Southampton oo ay ku booqatay garoonka Saint Mary’s
Kooxda Juventus oo isku diyaarinaysa inay heshiis cusub ka saxiixato Matthijs de Ligt kaddib markii…
Mid ka mid ah xiddigaha Manchester City oo qarka u saaran inuu isaga tago garoonka Etihad, markii loo sheegay inuu koox cusub raadsado
Barcelona oo doonaysa inay Kooxaha Liverpool iyo Chelsea ku garaacdo saxiixa Raphinha
Leeds United oo taako u dhigtay kooxda Man United oo ku soo booqatay garoonka Elland Road… +SAWIRRO
Dajiye April 25, 2021
(Leeds) 25 Abriil 2021. Leeds United ayaa taako u dhigtay kooxda Manchester United oo ku soo booqatay garoonka Elland Road, kaddib markii ay ku kal baxeen bar-bardhac 0-0 ah, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League.
Qeybta hote ee ciyaarta ayeey labada kooxood Leeds United iyo Manchester United ku kala nasteen bar-bardhac 0-0 ah.
Qeybta labaad ee dheesha marka dib leysugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan, iyagoo sameeyay fursado badan ee goolal loo filan karay.
Balse ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay bar-bardhac 0-0 ah ay ku kala baxeen labada kooxood Leeds United iyo Manchester United, kaddib ciyaar aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Elland Road.
Red Devils ayaa fadhisa booska labaad ee kala sareynta horyaalka iyadoo leh 67 dhibcood, waxayna 10 dhibcood ka hooseysaa hoggaamiyaasha Premier League ee Manchester City.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur ee Final-ka Carabao Cup oo la shaaciyey
Barcelona oo 10 xiddig kooxda Villarreal ah ku soo garaacday Estadio de la Ceramica… +SAWIRRO
Gool FM: Radio Live Stream